निशा र ऋचालाई एलिजाको कटाक्ष, किन गर्दैछिन् बिरोध ? « Ramailo छ
निशा र ऋचालाई एलिजाको कटाक्ष, किन गर्दैछिन् बिरोध ?
चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले नायिकाद्वाय निशा अधिकारी र ऋचा शर्मालाई कटाक्ष गरेकी छिन् । ईन्स्टाग्राम लाइभमा निशा र ऋचाले गरेको सेक्स सम्बन्धी सवाललाई लिएर एलिजाले कटाक्ष गरेकी हुन् ।
‘अनुराग’ नामक फिल्ममा नायिका भएर अभिनय गरेकी एलिजाले किन गरिन् त निशा र ऋचाको कटाक्ष ? यसलाई बुझ्न अगाडी नै जानुपर्ने हुन्छ । एलिजा गौतमका पति ऋषि धमलाले ‘धमलाको हमला’देखि ‘जनाता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा नायिकालाई यौनजन्य प्रश्न सोध्दै आइरहेका छन् । केही समय अगाडी अभिनेत्री निरुता सिंहको भर्जिनीटी बारे धमलाले प्रश्न सोध्दा नायिका ऋचा शर्माले मिडियामै आएर बिरोध जनाएकी थिइन् ।
यता नायिका निशा अधिकारी लकडाउनको खाली समयमा महिला कलाकारहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिने गाली गलौजमा शून्य सहनशिलता हुनुपर्ने अभियान चलाइरहेकी छिन् । एक टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा सञ्चारकर्मी धमलाले आइन्दा यौनजन्य प्रश्न नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको ‘जिरो टोलोरेन्स’ नामक फेसबुक समुहमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
आफ्ना पतिको यौनजन्य प्रश्नप्रति बिरोधमा उत्रिएका निशा र ऋचाले इन्स्टाग्राम लाइभमा सेक्स सम्बन्धी सवाल गरेको भिडियो क्लिप बाहिरिएपछि आफ्ना श्रीमानको पक्षमा वकालत गर्दै दुई नायिकाप्रति कटाक्ष गरेकी हुन् । एलिजाले निशा र ऋचाको उक्त भिडियो क्लिप आफ्नो इन्स्टाग्राममा सेयर गर्दै लगातार आफ्ना भनाईहरु राख्दै आइरहेकी छिन् ।
‘ऋचा र निशाबिचको यो यौन सम्बन्धी प्रश्न अब के सही छुट्याउनु होस्’, एलिजाले लेखेकी छिन् । ऋचा र निशाले यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।